भारतीय गु'प्तचर ‘रअ’का प्रतिनिधि काठमाडौंमा, वामदेव गौतम पछि ह'टे - Sidha News
काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपाभित्रको वि’वाद कायमै छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारतको चलखेल भइरहेको बताएपछि मुलुकभर राजनीतिक तरंग सृजना गरेको थियो । यसपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन ओलीलाई दवाव दिए।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मागेपछि ओलीले पनि संघीय संसदकै चालु अधिवेशन अन्त्य गराए । सदनको अधिवेशन अन्त्य गराएपछि नेकपाको विवाद चरमो’त्कर्षमा पुगेको छ । नेताहरुको घर घरमा बैठक बसिरहेको छ।
तर, शनिबार अपरान्हदेखि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छलफल र बैठकमा देखिन छाडेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा भारतीय गु’प्तच’र संस्था ‘रअ’का प्रतिनिधि आएको चर्चापछि गौतम छलफल र बैठकमा देखिन छाडेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारतको चलखेल बताइरहँदा रअका प्रतिनिधि काठमाडौं आएको चर्चापछि गौतम पछि ह’टेका हुन्।
महाकाली सन्धिताकादेखि भारत वि’रोध कि’त्तामा आफूलाई उभ्याउँदै आएका गौतम रअका प्रतिनिधि आएको थाहा पाएपछि अहिलेको राजनीतिक चलखे’लबाट पछि हटेको चर्चा नेकपाभित्र चल्न थालेको छ । प्रचण्ड, नेपाल र खनाल समूहमा रहेर ओलीमाथि दवा’व सृजना गरेका गौतम उनीहरुको समूहबाट अलग भएको खबरपछि ओली समूहका नेताहरु शनिबार राति गौतम निवास पुगेका थिए । गौतमलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन ओली समूहका नेता गौतम निवास पुगेका हुन्।
शनिबारदेखि गुटको छलफलमा सहभागी नभएका गौतम आइतबार प्रचण्ड, नेपाल, खनाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जाँदा सहभागी भएनन् । शनिबारदेखि उपाध्यक्ष गौतम पार्टीको विवादबाट टाढा बस्न थालेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्।
“कमरेड ! आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र
“नेकपामा विवाद बढ्दा भूतप्रेतहरु सल्बलाउन थाले”-
नेपालकी विष्टले जितिन् पाकिस्तानमा स्वर्ण
बससँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृ’त्यु
राजधानीमा पनि निस्कियो राजतन्त्र पक्षधरको मोटरसाइकल
ओलीको अफवाह जवाफ , घमण्ड र अहङ्कारले पार्टी चल्दैन : प्रचण्ड
‘विप्लवले गरेको ‘क्रान्ति’ भ्वाङ परेको छ’ – गोकुल बाँस्कोटा
विप्लव समूहका नेताहरु कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश, गोकुल बाँस्कोटाले गरे स्वागत
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट्राचारको प्रकरण ढाकछोप गर्न मर्यादा नै बिर्सिदिने ?
बन्द खाममा बुझाए ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ
ओली-प्रचण्ड प्रतिवदेनमाथि छलफल गर्न फेरि पनि सचिवालय बैठक बस्‍ने